Archive du 20171128
Vaky fasana teny Mahitsy Razana 135 nangalana taolan-dava
Zava-doza no nitranga tany Soavinimerina ao anatin’ny kaominin’i Mahitsy ny alahady lasa teo. Nivoha nidanadana ny varavaran’ny fasana iray. Rehefa nojerena dia nisy namaky io fasana io ary nikorontana ambony ambany ireo razana tao anatiny.
Parlemantera Belza sy Malagasy Manamafy orina ny fiaraha-miasa
Ao anatin’ny tontolon’ny fiaraha-miasan’ny samy parlemantera avy amin’ny firenena miteny frantsay, ny « Delegasion du Parlement de la Fédération Wallonie – Bruxelles (PFWB) » dia manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara mandritra ny valo andro,
TIM Ihorombe Efa manomana ny fifampiarahabana ny taona vaovao
Nivory tao Ihosy renivohitry ny faritra Ihorombe ny antoko TIM any amin’iny faritra iny notarihin’ny Reg TIM, Velomana Roger, sy ny DISTIM Ihosy, Gabriel, ary notronin’ireo ComTIM ao amin’ny Distrika Ihosy sy ny DISTIM Ivohibe sy Iakora, ny sabotsy 25 novambra 2017.
Fa inona foana ?
Fa inona foana ity mampievotrevotra ? Tsy misy asa vita, miseho ho be hevitra Tokanana avokoa izay azo tokanana. Amidy daholo rehefa fananana.
Terak’i Betroka teny Antaninarenina Miaro ny depiote Jean Nicolas
Mandalo eto Iarivo ny terak’i Betroka ahitana ben’ny tanàna miisa 19 any amin’ity distrika ity, notarihan’ny filohan’izy ireo, Raherivelo Abel Julien izay avy namonjy ny zaikabem-paritry ny HVM tany Mahajanga.
Silamo mpitsoa-ponenana Misy koa any Mahajanga
Miha mitombo isa ireo olona be volombava sy misarebareba fitafy hita mifamezivezy amina toerana maro eto Madagasikara.
Mety ho zava-doza ny lalàna momba ny ZES Ataovy ny atrikasam-pirenena, hoy ny SECES
Nanatanteraka fivoriana ny Sendikan’ny Mpampianatra-Mpikaroka sy ny Mpikaroka-Mpampianatra (SECES) rantsana Antananarivo ny 24 novambra lasa teo.
Fiakaran’ny vidin-jiro ho an’ireo mpanjifa vaventy Hampiharina amin’ny taona 2018
Hampiharina manomboka amin’ny taona 2018 ho avy io ny fiakaran’ny vidin-jiro eo anivon’ny orinasa JIRAMA, araka ny drafitra fanarenana ny orinasa izay voasoritra ao anatin’ny lalàna vaovao hifehy ny famatsiana ny herinaratra eto amintsika.
Mponin’i Morombe Nomena fahalalana bebe kokoa momba ny asan’ny CNaPS
Vao miresaka CNaPS dia ny volan-jaza sy ny fisotroan-dronono no be mpahalala. Ho an’ny vahoakan’i Morombe, indrindra ireo mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina dia sambany izy ireo no nahafantatra fa hay ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy (na ny CNaPS) ihany koa dia mandray an-tanana izay tra-doza am-perinasa na koa marary vokatry ny asa.
Analakely Nodiovina ny pavillon
Anisan’ny vinan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana ny asa fanadiovana sy ny fandaminana ny tanànan’Antananarivo.
Fandaminana ny tsena Petite Vitesse Manaiky ny ankamaroan’ireo mpivarotra
Na dia nisy tamin’ireo mpivarotra etsy amin’ny tsenan’ny Fihavanana Petite Vitesse aza no velom-panahiana teo aloha mikasika ny asa fanatsarana sy fikarakarana ity tsena ity hotanterahin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra dia tonga saina ihany izy ireo rehefa nohavazaina taminy ny tena marina.
Bazary Marolaka Mahajanga Tezitra amin'ny ben'ny tanàna ireo mpivarotra
“Ajanony ny M'vola, hajao ny bokin'andraikitra, aoka izay ny didy jadona”.
Krizy eto amin’ny firenena Miantso fanetren-tena sy firaisankina ny FFKM
Taorian’ny fivoriana nataony tany Antsirabe ny 23-26 novambra teo, dia vara-datsaka ary mahery ny fanambaran’ny FFKM.
Baolina kitra-fifidianana filohana Ligy Misy resaka tsy milamina
Manomboka mafampana ny tontolon’ny baolina kitra amin’izao fotoana, noho ny resaka fifidianana.
Karate Do sampana Fihezama Mpikatrako 125 no nandray anjara
Nahatratra mpikatroka 125 avy amin’ny klioba 25 misy ireo mpikatroka nandray anjara tamin’ny fifaninanana Karate sampana Fihezama notontosaina ny sabotsy 25 novambra teo teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano. Ity no namarana ny hetsika karate sampana Fihezama taona 2017.
Tsy azo antenaina
Asa aloha izay fahagagana hataon’ny mpitondra HVM fa raha izao zava-misy iainan’ny olona manerana ny nosy izao dia 1er Tour dia mihintsana ny kandida Rajaonarimampianina.
Taksibrosy amin’ny RN2 Hitokona rahampitso
Hitokona avokoa ireo taksibrosy sy kamiao mampiasa iny lalam-pirenena faharoa iny ka tsy hiasa rahampitso alarobia. Lohalaharana amin’izany ny mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina.
Pesta an-tanàn-dehibe Tapitra, hoy ny praiminisitra
Ambara fa tapitra ny fisian’ny valanaretina « peste pulmonaire urbaine » na ny pesta aretin-tratra eto Madagasikara raha tany amin’ny volana aogositra 2017 no nisehoany voalohany, hoy ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier omaly.
Fampihenana ny fahafatesan’ny reny sy ny zaza Nankasitraka ireo mpitsabo Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina
Mba hahafahana mampihena ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza eo am-piterahana dia notoloran-dRtoa Voahangy Rajaonarimampianina mari-pankasitrahana avokoa ireo tompon’andraikitra ara-pahasalamana eny anivon’ireo tobim-pitsaboana CSB II eto amintsika, manatanteraka ilay tetikasa CARMMA (Campagne pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle et Infantile en Afrique).
Za’Gasy Sahy Mandroso Fokontany 4 no nandrarahana D.D.T
Araka ny efa nambarany tany aloha dia hanatanteraka hetsika fandrarahana fanafody famonoana bibikely isam-bolana eny amin’ny
Sekoly ambony ISPFS Leader Nalana tamin’ny toerany izay ekipa tsy nahomby
Manatanteraka asa fanadiovana ny eo anivon’ny sekoly ambony ISFPS Leader( Institut Superieur de formation Paramédical Science et de la Société) tarihin’ny filoha tale jeneraliny Mahasoa Leader entina hanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana hatolotr’izy ireo.
« 1 anala Dj » Manandratra soatoavina anaty mozika
« Andrianiko ny kantoko, feheziko ny an’ny hafa ». Io no teny filamatra entin’ny « 1 anala Dj » anatin’ny fikirakirana ny hira sy ny mozika. Fantatra tamin’ilay vazo « Zarako aza Gasy » ny tovolahy tany amin’ny taona 2015.
Tratra i Zaka lava jiolahy raindahiny Mitaky fitsaram-bahoaka ireo nanaovany asa ratsy
Fanafihana ny lehiben’ny faritra teo aloha Ranaivonirina Jean Yves no nahafantarana an’i Zaka lava. Mpikambana amin’ny tambajotra jiolahy mahery vaika ao Ambatondrazaka ny lehilahy.
Nohamarinin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny fisian’ny miaramila sy polisy izay niray tsikombakomba tamin’ny fanafihana sinoa mpandraharaha amin’ny volamena tany Ambalahosy-Mananjary.